दिनेश शर्मा सोमबार, मंसिर १६, २०७६, ०९:२०
राजविराज– २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका- ७ मा वडा अध्यक्षको उम्मेदवार बनेका अच्छेलाल यादव मंसिर १४ को उपनिर्वाचनमा पनि सोही पदमा उम्मेदवार बने। २०७४ सालमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका उनी ८ मतको झिनो अन्तरले राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा)का उम्मेदवार प्रभाकर यादवसँग पराजित भए।
प्रभाकरले २८८ मत ल्याउँदा अच्छेलालको मत २८० थियो। करिब २० वर्ष नेपाली कांग्रेसको राजनीति गरेर पार्टीले नपत्याएपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिँदा गुमेको साख फर्काउन यसपटक पनि उनले उम्मेदवारी दिए। उनले याे पटक नेकपाबाट उम्मेदवारी दिएका हुन्। उपनिर्वाचकाे चुनावी मैदानमा २ स्वतन्त्रसहित ७ जना उम्मदेवार थिए। राजपाबाट भने प्रभाकरकी पत्नी प्रमिलादेवी यादव उम्मेदवार बनेकी थिइन्।
समाजवादी पार्टीसमेतको समर्थनमा उम्मेदवार बनेकी प्रमिलालाई अन्तिम अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले पनि समर्थन गर्‍याे। राजपाका तीनजना केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, सरतसिंह भण्डारी र राजकिशोर यादव प्रमिलाको चुनाव प्रचारमा खटिए।राजपाले प्रतिष्ठाको विषय बनाएपछि अन्ततः ११ मतको अन्तरले अच्छेलाल फेरी पराजित भए।
एक पटक पति र अर्को पटक पत्नीसँग झिनो मतले पराजित हुँदा उनी निरास छन्। शनिबार राति घोषित परिणामअनुसार प्रमिलाले ५ सय ४० र अच्छेलाले ५ सय २९ मत पाएका छन्। उनले यस पटक पनि निकटतम प्रतिद्वन्द्वी भएर चित्त बुझाउनु परेको छ।
राजपाबाट निर्वाचित प्रभाकर यादव जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखमा निर्वाचित भएपछि रिक्त अध्यक्ष पदमा उपनिर्वाचन भएको हो।
कसकाे कति मत?
घोषित मत परिणामअनुसार राजपाकी प्रमिला र नेकपाका अच्छेलाल बाहेक अन्य कसैले पनि १५ मत कटाउन सकेनन्। अन्तिम अवस्थामा राजपालाई समर्थन गरेको नेपाली कांग्रेसका शिव नारायण मण्डलले १५ पाए। तर, जितको दावी गर्दै आएको डा. सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका दिनेश कुमार यादवले ११ मतमा चित्त बुझाउनु पर्‍याे। यसैगरी, राप्रपाका गजेन्द्र मण्डल र स्वतन्त्र उमेदवार धीरेन्द्रकुमार यादवले २/२ मत पाएका छन् भने अर्का स्वतन्त्र उम्मेदवार नुर हुसन मंसुरीले १ मत पाएका छन्।
छिन्नमस्ता ७ का ६४६ महिला र ७५७ पुरुष गरी कूल १४०३ मतदाता मध्ये ५५३ पुरुष र ५६१ महिला गरी १११४ जनाले मतदान गरेका थिए। खसेको मध्ये १४ मत बदर भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत चन्द्रमणी ज्ञवालीले जानकारी दिए।